चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट बहस - Karobar National Economic Daily
चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट बहस
query_builderMay 30, 2017 10:34 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility509
व्यवस्थापिका संसदमा चालु आव २०७४/०७५ को बजेट भाषणमा सहभागीहरु । इन्सेटमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा । तस्विर: दिपक गाउँले
संघीयता कार्यान्वयन गर्न ऐतिहासिक बजेट
वर्षमान पुन ,पूर्वअर्थमन्त्री
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ल्याइएको बजेट समग्रमा उत्कृष्ट छ । यो बजेट संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐतिहासिक हुनेछ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
त्यसैले पनि यो बजेट ऐतिहासिक छ । बजेटले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकालाई १० करोडदेखि ३९ करोड, नगरपालिकालाई १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकालाई ४० देखि ६३ करोड र महानगरलाई ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसले सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पु-याउने कुरा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने क्रममा रहेको अवस्थामा यो बजेटले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनको विषयमा समेत बोलेको छ ।
त्यसैले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन भई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुने कुरा सुनिश्चित भएको छ । यो बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले समग्रमा राम्रो छ ।
फास्टट्र्याक, रेलमार्ग, ऊर्जाक्षेत्र, पुनर्निर्माणलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकमा राखेर बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत हुने र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण सकारात्मक छन् ।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आचरसंहिता लागू भइसकेको विशिष्ट परिस्थितिमा आएको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश हुन सकेनन् । यद्यपि बजेट सकारात्मक छ । निर्वाचनपछि सरकारले पूरक बजेट ल्याउला । त्यसमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्नेछ ।
इच्छा–आकांक्षा धेरै छन्
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा इच्छा–आकांक्षा धेरै छन् । यसमा केही राम्रा पक्ष पनि छन् । त्यो राम्रो पक्ष भनेको तल्लो तहलाई अधिकार दिइएको छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? त्यसको प्रशासकीय संरचना कहाँ छ ? यो मुख्य विषय छ ।
बजेट बनाउनुअघि मैले आफ्नो सल्लाह दिएको थिएँ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा जाने भन्ने संविधानले दिएको अधिकारको कुरा जो छ, त्यो सही हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा अर्थमन्त्रीले दिएको अधिकार होइन । तर, तुरुन्त एकैचोटि अधिकार गाउँमा जाने भनेर भनिएको छ, नीतिगत रूपमा त्यो कुरा सही छ । तर, कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?
कस्ता मानिस निर्वाचित भएका छन्, यसका लागि जुन प्रशासकीय संरचना चाहिन्छ, त्यसको बिल्कुल अभाव देख्छु । प्रशासकीय संरचनाका लागि तत्काल पूर्वाधार छैन ।
त्यसकारण प्रशासकीय पूर्वाधारको अभावमा यी सबै अधिकार कसरी एकैचोटि कार्यान्वयन हुन सक्छन् भन्नेमा प्रशस्त प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । बजेटले भोलि नयाँ सरकारले ल्याउन सक्ने पूरक बजेटका लागि स्पेस नै राखेन ।
स्थानीय तहका लागि जसरी रकम छुट्ट्याइएको छ, त्यो सकारात्मक छ । स्थानीय तहका लागि गएको बजेट कसले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट आएन । बजेट कार्यान्वयनका बारेमा अझै प्रशस्तै प्रश्न छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राम्रो
सरकारले ल्याएको बजेट राम्रो छ । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बजेटलाई राम्रो मानेको छु । बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा वृद्धि भएको छ । मलाई के लाग्छ भने गाउँपालिकालाई रकम कम भयो, त्यहाँ रकम बढाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा नयाँ नेता आएका छन् । उनीहरूलाई किन विश्वास नगर्ने ? विश्वास गरौं । अहिले स्थानीय तहलाई दिइएको रकमको सदुपयोग हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । अहिले देशको ठूलो चुनौतीका रूपमा व्यापारघाटा रहेको छ । अहिले ६ खर्बको व्यापारघाटा छ । २ महिनापछि ८ खर्ब पुग्छ । व्यापारघाटा घटाउन आयात कम गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ ।
त्यस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएका छैनन् । रेमिट्यान्स लिकेज भइरहेको छ । त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । गरिबी निवारणका कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । गरिबका लागि पठाइएको पैसा पनि उनीहरूले पाइरहेका छैनन् । त्यसलाई एउटै छातामुनि ल्याएर गरिबले पाउने गरी कसरी पु¥याउने, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
ठूलो आकारको आयो
बजेटले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने भनिए पनि आकार भने धेरै ठूलो छ । नयाँ कार्यक्रम नै आएको भए पनि बजेट सायद योभन्दा ठूलो आउँदैनथ्यो होला । पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भने पनि यो ठूलो आकारको बजेट नै हो ।
बजेटमा १३ वटा विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, रेलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र स्तरोन्नतिलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । तर, यो तत्कालै हुन सक्ने अवस्थामा छैन । यो अहिले नै नपुग्ने कुरा हो ।
बंंैक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सञ्चालन प्राथमिकताको विषयमा राख्नुपर्ने विषय नै होइन । यो नियमित काम हो । त्यस्तै मलाई शिक्षामा अपेक्षित बजेट आएको छैन भन्ने लाग्छ । संविधानले १२ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । तर, सो अनुरूपको बजेट नआउने र बजेट घटाउने हो भने नगरपालिकाको बजेटले सो कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
बजेटमा केही नयाँ कुरा पनि आएका छन् । किसानलाई पेन्सन दिने कुरा छ । त्यस्तै, लडाकु र सहिद परिवारलाई विद्युत्को सेयर दिने कुरा नयाँ हुन् । यो बजेटका केही राम्रा पक्ष पनि छन् । जस्तो कि बजेट कार्यान्वयन भएन भन्ने कुराको सम्बोधनतर्फ बजेटमा ध्यान दिइएको देखिन्छ ।
निकासा, बिल फछ्र्योटलगायत बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केही बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो भयो भने निर्माणका क्षेत्रका कमजोरी र बजेट कार्यान्वयनका त्रुटि हटाउन सकिन्छ । सरकारले अहिलेको आर्थिक वृद्धिदरबाट हौसिएर ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका चुनौती पनि धेरै छन् ।
स्थानीय तहका कार्यालय छैनन् । कर्मचारी पनि छैनन् । अझै दुई तहको चुनाव बाँकी छ । समयमा यी कुरा भएनन् भने खर्च नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । मौसम यस वर्षको जस्तो हुन्छ कि हुँदैन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धिद्धर बजेटमा आएजस्तो हासिल हुन सहजचाहिँ देखिँदैन ।
बजेट काम गर्न नसक्नेहरूको रुवाइ
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी , पूर्वअर्थमन्त्री
यो बजेट काम गर्न नसक्नेहरूको रुवाइ हो । यो अघिल्ला बजेटको निरन्तरता हो । खासै यसले जनचाहनाअनुसार काम गर्नेमा आश्वस्त हुन सकिँदैन । बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पुरानैको निरन्तरता एउटा रोग हो । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट यसको पुनरुत्थान हो ।
निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश भएनन्
समग्रमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मिश्रित खालको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागेकाले निजी क्षेत्रका धेरै सुझाव बजेटमा समावेश भएका छैनन् । ७ खर्बको राजस्व लक्ष्य अलि अपत्यारिलो लाग्यो । लगानीमैत्री बजेट आएको भए यो राजस्व लक्ष्य सम्भव थियो । यस्तै गरी ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि लगानीमैत्री बजेट नभएपछि कसरी पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
बजेटप्रति अलिकति उत्साहित पनि छु । अर्थतन्त्रमा अलितकति मोमेन्टम आएको छ । पूरक बजेटमा हामीले दिएका सुझाव समावेश हुनेमा आशावादी छौं । निजी क्षेत्रमैत्री छैन भन्न मिल्दैन, तर हामीले दिएका सुझाव समेटिएका छैनन् ।
खासगरी नीतिगत सुझाव समावेश नभएका हुन् । अहिलेसम्म रातो किताब हेर्न पाएको छैन, तर बजेट वक्तव्य सुन्दा दुई–तीनवटा सुझावबाहेक अरू समेटिएका छैनन् । संकेत नम्बरको ‘हार्माेनी कोड’ बाहेक अरू सुधार भएको पाइएन ।
आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ
विषम परिस्थितिका बीच आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट आएको छ । निजी क्षेत्रले दिएका केही मात्रै सुझाव समावेश भएका छन् । राजस्वका दरहरू परिमार्जन गर्न हामीले दिएका सुझाव निर्वाचन आचारसंहिताका कारणले हेरफेर गर्न नसकेको बजेट वक्तव्यमा आएको छ ।
बजेट कार्यान्वनबाट आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य विस्तार भई ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा बजेटले गरेको छ । राजस्वका दर परिमार्जन नगरी यो वृद्धिदर सम्भव होला भन्ने लाग्दैन । बजेटले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित हुने भने पनि यो कुरा मौसममा भर पर्ने देखिन्छ ।
पावर सप्लाई बढेकाले उत्पादन बढ्ने अनुमान गर्न भने सकिन्छ । बजेटले १ लाख स्वरोजगार र ४ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा लिएको छ, तर यसका लागि लगानीमैत्री बजेट आउनुपर्छ ।
उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम समावेश भएनन्
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्थानीय तहलाई १७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाउँदै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संघीय राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने भनिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताले नयाँ कार्यक्रम समावेश नभएको बताए पनि बजेटको आकार बढ्दा आशालाग्दा कार्यक्रम थप भएनन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान घट्दै गए पनि बजेटमा प्रोसाहन हुने खालका कार्यक्रम समावेश भएनन् । सरकारले ४ लाख नयाँ रोजगारी र १ लाख स्वरोजगारको कुरा ल्याएको छ, यो कसरी सम्भव छ भनेर हेरिएको छैन ।
उद्योगलाई प्रोत्साहन नगरी रोजगारी बढाउन कठिन छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ६२.८, पुँजीगततर्फ २६.२ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ प्रतिशत रकम छ । चालू खर्चको हिस्सा धेरै भएकाले लक्ष्यअनुसारको रोजगारी सिर्जना हुन कठिन छ ।
संघीयता बजेट बहस पूर्वअर्थमन्त्री